Turkiga oo xero milateri ka dhisanaya Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Turkiga oo xero milateri ka dhisanaya Soomaaliya
A warsame 8 January 2016
Mareeg.com: Turkiga ayaa bilaabay dhismaha saldhiga militiri oo uu ku yeelanayo Soomaaliya taas oo qeyb ka ah balan qaadkii oo horey u sameeyay kaas oo ahaa in uu dowladda Soomaaliya ka taageeri doono dhismaha iyo tayaynta ciidanka qalabka sida ee dalka, sida laga soo xigtay diblomaasi sare oo Turkiga ah.
“Tani waa xarunta militiri oo ah mid muhiim ah, siin doonatana tababaro guud ahaan qaaradda oo dhan (Afrika),” waxaa sidaasi sheegay Emel Tekin, oo ka tirsan wasaaradda arimaha dibadda.
Xerada Milateri ee Turkigu ka sameynayo Muqdisho ayaa ku taalla dhulka u dhaxeeya Muqdisho iyo deegaanka Jazeera, waxeyna saaran tahay badweynta Hindiya.
Iran oo dacweyneysa boqortooyada Sacuudi Carabiya